SOCOLAIT: Miara-miasa amin’ny mpiompy miisa | Madatopinfo
SOCOLAIT: Miara-miasa amin’ny mpiompy miisa
par Madatopinfo	 0 commentaire(s)
Notanterahina nanomboka ny Alakamisy 03 May lasa teo teny amin’ny Forello Expo Tanjombato ny Foire Internationale de Madagascar na ny FIM, ka hifarana rahampitso Alahady. Mandray anjara mandritra ireo andro efatra ireo ny orinasa Socolait izay anisan’ireo mpandray anjara mavitrika amin’ity hetsika ity. Ao anatin’ireo orinasa manana kalitao tsara sy miavaka indrindra izy ireo amin’ireo 140 mahery hafa mandray anjara. Maro ny vokatra vaovao be novokarin’ny Socolait tamin’ity taona ity izay hita mandritra ny FIM.
“Ny antony handraisanay anjara amin’ity hetsika ity ny mba hifanerasera amin’ny mpanjifa sy ny mpakafy ny vokatra, eo ihany koa ny hampisehoana ireo vokatra isan-karazany. Fanambinay ny namoahana ireo vokatra vaovao be maro talohan’ity hetsika ity”, hoy ny tomponandraikitra ara-barotra Niriavotra Randrianarivelo.
Mampiavaka ity orinasa ity ny fampiasana ny akora fototra, ny rononovelona zato isan-jato. Miara-miasa amin’ireo tantsaha mpiompy miisa 1.200 any amin’ny Faritra Vakinankaratra izy ireo. Araka ny fantatra, ronono mandalo ftiliana im-betsaka vao tonga amin’ireny vokatra hita ireny. Amin’izao fotoana izao, mahavita manangona ronono 12.000 litatra isanandro ny orinasa Socolait. “Orinasa Malagasy, nataon’ny Malagasy ary natao ho an’ny Malagady ny Socolait. Hatreto, tsy mbola manondrana ny vokatra mankany ivelany izahay fa ao anatin’ny fanamby aloha ny amin’ity taona ity ny handrakofana ny vokatra manerana an’i Madagasikara”, hoy hatrany ny tomponandraikitra. Vao haingana mantsy no nosokafana ny tambajotra Socolait mankany Nosy Be sy Diego. Tsy hijanona eto an-toerana kosa anefa izany, fa fanamby manaraka hotratrarin’ity orinasa ity ny hanondranana ny vokatra mankany ivelany mba ahafantarana ny Socolait eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena.
Manakaiky ny vahoaka hatrany ny ny Socolait ary miezaka hatrany manome fahafaham-po ho an’ny rehetra amin’ny alalan’ireo vokatra amin’ny vidiny mirary.
MINISTRY NY MPONINA SY NY FIAHIANA ARA-TSOSIALY: Nanolotra “Maisons contenaires” ho an’ireo mponina eny La Réunion kely
FAHATAPAHAN-JIRO: Hitondra vahaolana maharitra ny Ministeran’ny angovo sy ireo mpiara-miombon’antoka
YALI CHAPTER MADAGASCAR: Nanome fahafaha-po ho an’ny mpianatry ny sekolim-panjakana ambaratonga fototra miisa 20
FIKAMBANANA ANDRIMASO SY CRN VEHIVAVY: Nampahafantatra ny anjara toeran’ny vehivavy eo amin’ny sehatry ny fandriampahalemana
EASY PARK: Mitohy ny ezaka fanatsarana ho amin’ny fandaminana
ONIVERSITE TSY MIANKINA ESTIIM: Andiany “Hanitra”, nivoaka ny sabotsy lasa teo